New Studio ရှိ Newsroom နှင့် Graphics Workflow အတွက်ဆွီဒင်၏ TV4 သည် ChyronHego အပေါ်မှီခိုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဆွီဒင်ရဲ့ TV4 နယူးစတူဒီယိုထဲမှာသတင်းကဏ္ဍနှင့်ဂရစ်ဖစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အ ChyronHego အပေါ်မှီခို
MELVILLE, နယူးယော့ - ဇွန်လ 30, 2015 - ဆွီဒင်ရဲ့ TV4 installed ထားပါတယ် ChyronHego TV4 ရဲ့အားကစားနှင့်ထိပ်တန်းသတင်းနှင့်၎င်း၏နံနက်ရှိုးများအားလုံးအတွက်အသုံးပြုလျက်ရှိသောက၎င်း၏အသစ်ကစတူဒီယိုအတွက်သတင်းကဏ္ဍနှင့်ဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာမောင်းထုတ်ရန်ထုတ်ကုန်။ အဆိုပါ ChyronHego installation ကိုအလိုအလျောက်၏ပမာဏနှင့်ပတ်သက်သည့်ဂရပ်ဖစ်၏ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်းတစ်ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်စေသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်တစ်စုံဒီဇိုင်းနှင့် On-ဝေဟင်ဂရပ်ဖစ်ပရိသတ်တွေနှင့်ကြော်ငြာရှင်များနှစ်ဦးစလုံးအထင်ကြီးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ '' wow '' အချက်နှင့် wow အချက်ကြောင့်နောက်ကွယ်မှနည်းပညာတွေအများကြီးနှင့်တကွကြွလာကြပါပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လူတွေသာလက်တဆုပ်စာထုတ်လုပ်ရေးတွင် run ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အလိုအလျောက်အပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုအားထား။ အစိုးရှုပ်ထွေးဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲအချက်များ၏ပေါင်းစပ်ကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်ဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, "SjöfnBlöndal, TV4 မှာစီမံကိန်းမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ "ChyronHego ကျနော်တို့ရိုးရှင်းသောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ခဲ့ကြောင်းသိနားလည်ကြ၏။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အများအပြားဖန်သားပြင်နှင့်ဂရပ်ဖစ်လိုင်းများတင်းပလိတ်များထံမှပွေး ENPS အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသောသေချာစေခဲ့သည်။ "
TV4 အကောင်အထည်ဖော် ChyronHegoတစ်ခုလုံးကိုဖြေရှင်းချက်၏နောက်ကျောအဆုံးအဖြစ် CAMIO ဂရပ်ဖစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်လွှာနှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုသတင်းကဏ္ဍလုပ်ငန်းအသွားအလာ, အဘို့ '' s ကိုပြည့်စုံ BlueNet (TM) ဂရပ်ဖစ်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းနည်း။ အဲဒီလုပ်ငန်းအသွားအလာမရသာထိပ်တန်းသတင်းမောင်း, ဒါပေမယ့်အထိရှစ်ဂရပ်ဖစ်လိုင်းများများအတွက်ဖန်သားပြင်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ပလေးအောက်၌ရှိသမျှသော။ CAMIO TV4 ရဲ့ AP ENPS သတင်းထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ အော်ပရေတာကသူတို့ rundowns တည်ဆောက်ရန် ENPS ကိုသုံးပါ, ပြီးတော့အားလုံးဂရပ်ဖစ်အတွက် CAMIO ဂေဟစနစ်ကနေလူနေထူထပ်နေကြသည်။ ထိုအရပ်မှ, ChyronHego'' s ကို GS2 Real-time ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ဆော့ဝဲဖန်သားပြင်ဖို့ဂရပ်ဖစ်ပလေးအောက်ကိုမောင်း။
အသစ်ကစတူဒီယို၏အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းဟာ, အရာ 10 pixels ကိုအားဖြင့်3စုစုပေါင်း resolution နဲ့ 6144 မီတာ Ultra-high-resolution ဗီဒီယိုကိုမြို့ရိုးနားမှာနေတဲ့ဧရာမ 1536 မီတာဖြစ်ပါသည် ChyronHego ဖြေရှင်းချက်ပြုလုပ်ရန်ပြေး - ဂရပ်ဖစ်ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်များအတွက်ရှားပါး feat ။ အဆိုပါစတူဒီယိုလည်းလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့သို့မဟုတ်အတူတကွရွှေ့နှင့် TV4 မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များကိုတင်ပြခွင့်တစ်ခုတည်းပတ္တူဖွဲ့စည်းရန်လှည့်ကို configure လုပ်ထားနိုင်သုံးကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင်ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ChyronHego ဖြေရှင်းချက်တဦးတည်းလာသောအခါလိုအပ်သောအဖြစ်သုံးသီးခြားဖန်သားပြင်ကုသ, အ configurations မဆိုလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်။
"TV4 ရဲ့အသစ်စတူဒီယိုမျှသံသယယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမှဆိတ်ကွယ်ရာကတင်ထားရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်, ကြှနျုပျတို့ကြောင်းခံဝန်တစ်ဦးမိတ်ဖက်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်," Jesper Gawell မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိတစ်ဦးကဆိုသည် ChyronHego။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဒီနေ့ရဲ့ထုတ်လွှင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးသောစိန်ခေါ်မှုများတည်ဆောက်ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, TV4 ရဲ့ကြီးမားသောဗီဒီယိုမြို့ရိုးအမျိုးစုံဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်နှင့် high resolution ကတော့ကိုင်တွယ်ရန်ရှုပ်ထွေးပြီး setup ကိုသာမန်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့် ChyronHego ကိုယ့်အလွန်မြင့်မား-res ဖြစ်ဖြစ်ပျက့်အခြားဂရပ်ဖစ်ရုပ်သံလိုင်းအဖြစ်ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ TV4 တူသောထုတ်လွှင့်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းကူညီပေးရန်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လက်ရှိစနစ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသော်လမ်းထဲမှာပြုကြသာ။ "
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/ChyronHego/ChyronHego-TV4_Images.zip
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ဆွီဒင်ရဲ့ TV4 installs ChyronHego ၎င်း၏အသစ်ကစတူဒီယိုထဲမှာသတင်းကဏ္ဍနှင့်ဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာမောင်းထုတ်ရန်ထုတ်ကုန်။
Facebook က: www.facebook.com/chyronhego
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/chyron
YouTube ကို: www.youtube.com/user/chyronmelville
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ChyronHego ဆွီဒင် TV4 တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-06-30
ယခင်: ကနေဒါရုပ်ရှင်ရုံ & ရုပ်မြင်သံကြား၏အကယ်ဒမီကနေဒါမျက်နှာပြင်ဆုပေးပွဲအဘို့အ YANGAROO နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးချဲ့ခြင်း
နောက်တစ်ခု: ဖြတ်ကျော်ကမ္ဘာ့ဖလားရေဒီယိုအဆင့်မြှင့်မှုများနှင့်တိုးချဲ့ NETIA ရေဒီယို-Assist (TM) ထည့်သွင်းခြင်း